သင့်မှာ ရှေးရိုးစွဲမိဘတွေရှိသလား? သူတို့ကို လိမ္မာပါးနပ်စွာရင်ဆိုင်ဖို့ နည်းဗျူဟာ (၅)ခု - Lifestyle Myanmar
ငါတို့မျိုးဆက်က လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီလို့ ပြောတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို တွေ့ဖူးလား? ဒါက ကျွန်မတို့ရဲ့ အဝတ်အစားရွေးချယ်ခြင်း၊ လက်ရှိချိန်းတွေ့ခြင်း ယဉ်ကျေးမှု၊ ကျွန်မတို့ ရွေးချယ်သော မိဘအုပ်ထိန်းမှုပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ် (ဒါမှမဟုတ်) ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘဝနေထိုင်မှု ပုံစံကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မတို့အမြင်၊ အတွေးအခေါ်တွေကို ကျွန်မတို့မိဘတွေ လက်သင့်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားတဲ့ပုံပေါက်ပါစေ ကျွန်မတို့ကို အမြဲတမ်း နားမလည်ပုံရပါတယ်။ ဒါက မျိုးဆက်ကွာဟမှုကြောင့်ပါ။
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ အားလုံးက ရှေးရိုးစွဲတွေဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်မတို့ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်မှာအဆင်မပြေဖြစ်စေနိုင်မယ့် အိမ်နီးချင်း (သို့) သင့်ကို ဒုက္ခပေးတဲ့ လက်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ (သို့) ရှေးရိုးစွဲဆန်လွန်းတဲ့ လူမှုမီဒီယာမိတ်ဆွေကို တွေ့ဆုံရလိမ့်မယ့် အချိန်တွေရှိပါတယ်။ သူတို့က သင်နှင့် ပတ်သတ်ဆက်နွယ်နေသူတွေ မဟုတ်တာကြောင့်သူတို့နဲ့ ဆက်ဆံရတာက ပိုလွယ်ပါတယ်။ သူတို့ကို လျစ်လျူရှုထားနိုင်တယ် (သို့) ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ ဘလော့ထားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဘဝကနေတောင် လုံးဝထုတ်ပြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်မိဘတွေက ခေါင်းမာမာနဲ့ ရှေးရိုးစွဲဆန်နေတယ် ဆိုရင်ကော သင်ဘာလုပ်မလဲ? ။
သင့်အား အထောက်အကူပြုမယ့် အကြံဉာဏ် ၅ချက်ကို မျှဝေပေးပါမယ်။
နားထောင်ကောင်းသူဖြစ်ခြင်းက ငြိမ်းချမ်းပြီး အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသော စကားလက်ဆုံပြောဆိုခြင်းမှာ အရည်အသွေးကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံ ကျွန်မတို့ဟာ ကျွန်မတို့ ပြောချင်တဲ့ အချက်ကို သက်သေပြဖို့ အလွန်ထိမိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကျွန်မတို့ဟာ အခြားသူပြောတဲ့အရာကို ဘာအလေးထားမှုမှ မပေးဘဲ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အချက်ကို သက်သေပြနိုင်အောင် လုပ်မိကြပါတယ်။ သူတို့ပြောတာကို နားထောင်ပြီး အဲဒီအပေါ် အခြေခံကာ စကားဆက်ပြောပါ။ သူတို့ပြောတာ နားထောင်နေကြောင်း၊ နားလည်ကြောင်း သူတို့သိပါစေ။ ဒီနည်းဗျူဟာက အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ့်လို့ ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင်တို့နှစ်ယောက်အကြား ပွတ်တိုက်မှုကို လျော့ချပေးပါလိမ့်မယ်။ သင်နားထောင်တဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာကို တန်ဖိုးထားလေးစားကြောင်း သူတို့ကို သိစေပါတယ်။
၂။ အနိုင်ရရှိမှုက အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး
အငြင်းပွားမှုတွေက ပိုပိုပြီး ပြင်းထန်လာစေပါတယ်။ ပြီးတော့ မိဘနှင့် သားသမီးဆက်ဆံရေးကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ အရာရာကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့ ခံစားရပြီး သင့်စိတ်ခံစားမှုတွေက သင့်အတွက် ပိုကောင်းလာပြီလို့ ခံစားမိရင် ငြင်းခုန်နေတာကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ။ မိဘနဲ့ ငြင်းခုန်တိုင်းမှာ အနိုင်ရဖို့ မလိုပါဘူး။
၃။ သင့်စကားလုံးတွေကို သတိထားပါ
စကားလုံးတွေက ဓါးထက် ပိုထက်ပါတယ်။ တကယ်လို့ တာဝန်ယူမှုရှိစွာနဲ့ ထိရောက်စွာ အသုံးမပြုရင် စကားလုံးတွေက ဆက်ဆံရေးကို ဖျက်စီးဖို့ စွမ်းအားရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ဒေါသထွက်ပြီး စိတ်ပျက်တဲ့အခါ ရိုင်းပျတဲ့ စကားတွေပြောမိခြင်းနှင့် အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက မိဘနှင့် သားသမီးဆက်ဆံရေးကို ပျက်စီးစေနိုင်သလို သားသမီးမှာ အပြစ်လည်းရပါတယ်။ ထို့အပြင် သူတို့အသက်ကြီးလာတာနှင့်အမျှ မိဘတွေဟာ သင့်အပေါ်မှာ မှီခိုလာပြီး ပိုအားငယ်လာပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က သူတို့အပေါ်မှာ သားသမီးတွေ ရှိလိမ့်မလားဆိုတာကို သိလိုကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်လောက်ပဲ ငြင်းခုံဆွေးနွေးပါစေ၊ စကားလုံးတွေကို ပညာရှိရှိ ရွေးချယ်ပါ။
၄။ အခြေအနေတွေမှာ ဟာသကို ရှာဖွေပါ
သင့်မေမေ (သို့) ဖေဖေဟာ အငြင်းအခုံဖြစ်နေစဉ်အတွင်းမှာ လုံးဝရယ်စရာဖြစ်တာကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ ဘယ်လောက်ရယ်စရာကောင်းနေတယ်ဆိုတာကို ပြောပြမယ့်အစား သင့်ရဲ့ လက်တွဲဖော် (သို့)အစ်မနှင့်အတူ တီးတိုးဟာသလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက သင့်မိဘကို သင်တိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိရပါ။ ဒါက အတွေးအခေါ်ပါပဲ။
၅။ ကိစ္စသေးသေးလေးပဲဆိုရင် ထားလိုက်ပါတော့
သူတို့လုပ်တဲ့ တစ်ချို့အရာတွေကို မယုံကြည်ရင်တောင် သူတို့ယုံကြည်တဲ့အရာမှာ ပံ့ပိုးပေးတာက အဆင်ပြေပါတယ်။ သင့်ရဲ့တိုက်ပွဲကို ပညာရှိရှိရွေးချယ်ပါ။ ဥပမာ- အမေက နတ်တွေယုံကြည် ကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင် အလားတူ ယုံကြည်မှုမျိုး မကျင့်သုံးဘူးဆိုရင်တောင် ပွင့်ပွင့်လင်းပွင်းပြောပါ။
ဘယ်သူမှတော့ မပြည့်စုံပါဘူး- ကျွန်မတို့လည်းမပြည့်စုံသလို ကျွန်မတို့မိဘတွေလည်း မပြည့်စုံပါဘူး။ သင့်ရဲ့ လက်တွဲဖော်နှနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်မိဘတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ဖြစ်စေဖို့ အားစိုက်ထုတ်မှု၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် စိတ်ရှည်ခြင်းတို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့တိုက်ပွဲကို အမျှော်အမျှင်ရှိရှိ ရွေးချယ်ပါ။